Global Voices teny Malagasy » SARIPIKA: Zavakanto An-Tanandehiben’i Budapest Tokana Aman-Tany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Jolay 2013 20:12 GMT 1	 · Mpanoratra Tamara Gocmanac Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Hongria, Hevitra, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Ny renivohitr'i Hongria, izay efa malaza amin'ny tantara, ny zavakanto ary ny rafitranony, no hita mamelona ny sangan'asa an-tanandehibe tokana aman-tany mampiavaka azy andro maromaro izao. Mipongatra isan'andro ao amin'ny tambajotra sosialy tahaka ny Twiter sy ny instagram ireo sary sy fanehoan-kevitra hita amin'ny alalan'ny teny ifankafantarana #streetart (kanto an-dalambe)  momba an'i Budapest, indrindra fa efa hoavy ny vanim-potoanan'ny hafanana, vanim-potoanan'ny fizahan-tany.
Maro ireo efa nandre momba ilay artista mpanao mari-tanàna frantsay Invadera  izay mifototra indrindra amin'ny endrika lohalambo (fr:arcade) tany amin'ny fiafaran'ny taona 1990 ny maro amin'ny sangan'asany ary namela marika ho an'ny artista mpanao mari-tanàna an-tanàn-dehibe manerana an'i Eoropa. Avy eo ny endrika ara-javakanto tsy mahazatra nataony, street art [zavakanto an-dalambe] , dia voalanjalanja teo amin'ny fikatrohana anaty akata sy ny zavakanto malaza.
Nanao sarintany ny tanàna lehibe manerantany izay lalaina sy mamelona ny endrika vaovaon'ity zavakanto ity ihany koa ilay artista. Mandritra izany fotoana izany, Invader , nahazo anarana avy amin'ny lalao lohalambo (arcade) tany amin'ny faraparan'ny taompolo 1970 izay aingam-panahy avy aminy, dia ahitana ihany koa an'i Budapest ao amin'izany sarintaony izany izay ahitana soratra lehibe ho toy ny marika fa, nandritra ny taona vitsivitsy monja taorian'ny faharavan'ny vondrona (eoropeana) tatsinanana, dia teraka ny Alternative Budapest  vaovao, feno lalao, tanora tia manohitohitra.
Nanoratra ny mpisera Instagram Irelative_strang , izay fantatra ihany koa ho Janos Bako  (@JanosBako ) ao amin'ny Twitter:
nilaza ny heviny  ny mpisera Twitter hafa sy mpahaibika avy ao London, Steve Jude (@steve_jude ):
Ny izay mampaningana an'i Budapest mihoatra noho ny tanàndehibe hafa ny fahitana zavakanto an-dalambe mivoatra, saingy mahatsapa izany ve ny Hongroà. Ireny toera-pisotrosotroana, antsoina hoe “rom kocsma“ , na “toera-pisotroana efa rava”, ireny ny tena marina dia toera-pisotrosotroana natsangana avy amin'ny fanorenana rava na nilaozana, ka natao endrika an-tanandehibe isan-karazany maro. Tao anatin'ny taona vitsivitsy ireny toera-pisotrosotroana ireny dia saiky nanenika ny faritr'i Pesta ao amin'ny tanàna ary lasa iray amin'ny zavakanto an-tanandehibe mahafinaritra indrindra ka manintona ny mpizahatany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/07/04/49787/
 #streetart (kanto an-dalambe): https://twitter.com/search?q=%23streetart&src=hash
 street art [zavakanto an-dalambe]: http://en.wikipedia.org/wiki/Street_art
 nilaza ny heviny: https://twitter.com/steve_jude/status/348863228899639296